वामपन्थी मिल्दा काँग्रेसमा भुइँचालोः चित्रबहादुर केसी « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
वामपन्थी मिल्दा काँग्रेसमा भुइँचालोः चित्रबहादुर केसी
जितपुर, कपिलवस्तु । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका वामपन्थी दल मिल्दा सबैभन्दा ठूलो भुइँचालो नेपाली काँग्रेसमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । चन्द्रौटामा सोमबार पार्टीद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले काँग्रेसले भ्रमको खेती गरेको आरोप पनि लगाए ।
राणा शासन र राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका नेपाली जनताले कम्युनिस्टले ल्याउने अधिनायकवाद पनि सहन नसक्ने भन्दै काँग्रेसलाई अनावश्यक चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । सरकारको स्वाद चाख्न बानी परेको दलमा वामपन्थीले बहुमत ल्यायो भने सरकारमा जान पाइन्न भनेर हल्लीखल्ली मच्चिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भएको एक भेटको स्मरण गराए ।
केसीले आफूलाई एक दिन प्रधानमन्त्री देउवाले भेटेर देशमा दुई ठूला पार्टी मिले अब के होला ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको पनि उल्लेख गरे । आफूले त्यस भेटमा ‘वामपन्थी मिले, ठीक भयो, तर देशमा कम्युनिस्ट शासन आउँछ भन्ने चिन्ता नगर्नू’ भनेर जवाफ फर्काएको उनले बताए ।
संघीयताका कट्टर विरोधी अध्यक्ष केसीले संघीयताले मुलुकलाई निकास नदिने पनि दोहो¥याउनु भयो । रासस
जनता बैंकको यो साता सात नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले कारोवार विस्तारको क्रममा यो साता सात नयाँ शाखा कार्यालय
आजको ताजा तरकारीको होलसेल मूल्य थाहा पाउन यहाँ हेर्नुहोस्
काठमाडौ । आज कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा विभिन्न प्रकारका तरकारी उपलब्ध रहेका छन् ।